Betfair España | Apuestas deportivas online Betfair, App Móvil, Bono | yougambling.top | WAA INAAD FARSAMADA
Betfair waxaa lagu aasaasay 2000 ilaa iyo markaas isboortiga ayaa bixiya Paris, inta badan wadamada. Maanta waa isweydaarsiga ugu weyn ee Paris.
Tan iyo markii la abuuray, xaruntiisu tahay London oo laga diiwaan galiyay caasimada Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, bisha Febraayo 2016 bariis, kaas oo ku saleysan Dublin si uu ugu biiro.
Dalka Spain, maaraynta saxda ah ee shatiyada ugaarsiga sharci ahaan Betfair.
Betfair – SIYAASADAHA iyo OGAYSIISKA
Betfair waa hoyga Boqortooyada Ingiriiska ee ku yaal Paris, waxay bixisaa fursad weyn iyo nidaam ay macaamillada ugu waaweyn uguna sarreeya ee adduunka looga yaqaan suuqa saamiyada ee Paris. Waa buugga buugaagta ugu weyn ee Boqortooyada Midowday oo wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan uguna qaddarin badan adduunka, sidoo kale Spain.
Miscasasdeapuestas waxaan aad u naqaanaa boggan Paris, iyo xitaa qaar badan oo ka yimid Betfair. Marka laga soo tago dhinacyo badan oo wanaagsan, waxay kaloo leedahay cilado aan isku daynay inaan ka fikirno falanqeyntaan aan bixino.
Xaqiiqda ah in Betfair ay ka mid tahay kuwa aan ugu jecel nahay waa wax si fudud loo fahmi karo haddii aad u fiirsato qaybta isboorti ee Paris, halkaad ku aragto dhamaan waxyaabaha sare ee taxanaha ah iyo qiimaha isku tayo ah dhamaan kubada cagta heerka.
Wax soo saarkiisa gaarka ah iyo xiddiga ayaa shaki la'aan ah nidaamka qiimaha Paris – Isweydaarsiga Betfair – Marka lagu daro inay tahay kii ugu horreeyay ee soo gala suuqa, wali waa kan ugu weyn uguna wanaagsan adduunka..
Nidaamkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka hortagto rakaabka kale ee aadan ka hor imaanaynin guriga laftiisa, Betfair waa faa'iido, maadaama aysan ahayn inaad ka walwasho qarashaadka sidaad rabtay, laakiin waxay ku bixiyaan komishan yar waxtarka macaamilkooda. Laakiin waxa ugu muhiimsan adiga ... waa in suuqa uu ka helo fursado wanaagsan.
weydiiso, Betfair, laakiin aan la mid ahayn Bet365 ama William Hill. Hadaan ula jeedno khamaarka, Betfair waxay bixisaa ikhtiyaaro balaaran oo kala duwan iyo dalabyo kala duwan iyo ololeyaal ayaa loo habeeyay si ay ugu qalmaan macaamil ahaan.
ganacsiga caadiga ah iyo Paris
Betfair waxay siisaa khibrad u gaar ah adeegsadayaasheeda, maadaama ay u shaqeyso sidii sharad dhaqameed iyo Paris oo ah xarun laga dukaamaysto. Waa suurta gal in Paris la dhigo a “guriga” ama ka dhanka ah ciyaartooyda kale ee aadanaha. Si taas loo gaaro, Paris Cruz wuxuu go’aansaday inuu la wadaago ama beddelo.
In ka badan 30 isboorti
Ugu Dambeyn, laakiin ugu yaraan, waxaad fursad u heli doontaa inaad khiyaameyso wax ka badan 30 isboorti laga bilaabo dhacdooyinka kubada cagta, Tennis ama kubbadda koleyga, taas oo inta badan loo yaqaan hockey barafka, kubbadda koleyga, tennis, billiards.
Betfair Waxay Soo Dhaweyneysaa Macaamiisha Cusub Ee La Soo Bandhigay Lacag Bixiyeyaasha Isboorti Isagoo Ku Guuleysan Kara 100 €, waxaa loo qaybiyaa shan ka bilaash ah Paris 20 € midkiiba. Sida macaamiisha sharadka isboortiga, waxaad heli kartaa xulasho ku saabsan 30 isboorti kala duwan.
Waxaad ka heli doontaa caymiska ugu wanaagsan ee isboortiga ugu muhiimsan, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin dhibaatooyin siyaasadeed, oo ay ku jiraan kuwa kale, sida Bowling, dusha sare iyo qarashka. In kasta oo dhaqan ahaan diirada lagu saaray ciyaaraha Ingiriiska, Soo bandhigga haatan jira waa mid aad u dhameystiran oo ku dhawaad ​​ma ahan ajnabi, waxaa bilaabay Sportiga.
Kubadda Cagta Betfair
Laakiin kubada cagta ayaa leh Betfair ugu fiican. Isboortiga xulasho balaaran oo ciyaaro ah dhammaan geesaha wareega. Iyadoo Betfair inta badan diirada saarto kubada cagta England, markan kooxdii kubbadda cagta aad bay u fiicnayd guud ahaan.
Waxa aan jecel nahay waa xulasho isboorti oo wanaagsan iyo asalnimada Paris ... waxaad abuuri kartaa qaab Paris: Horyaalka kooxaha, tirada geeska ciyaarta kubada cagta ama sameynta ayaa ah koox amaan amaan ah.
In kasta oo websaydhku uusan yeelan karin dhinacyada adduunka ugu fiican haddana wuu ka fiican yahay sida muuqata. Waxaad ka heli doontaa ku dhawaad ​​horyaal kasta, Ciyaaraha kubbadda cagta ee Paris iyo galmada; waana kuu xaqiijinayaa inaadan heli doonin fursad wanaagsan oo aad ku beddelato Betfair Soccer Paris.
Hadaad jeceshahay inaad sharad ka hesho Horyaalka Isbaanishka, laakiin sidoo kale Bundesliga, Taxanaha Premier iyo Talyaani iyada oo aan laga labalabeyn… waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo adeegyada Betfair, oo waliba ku nool kuna shaqeeya Paris.
Paris tartan iyo faa'iido toos ah
Suuqa kubada cagta, Tennis iyo basketball Betfair ayaa ah kuwa ugu tartama suuqa khamaarka. Waxay sidoo kale leedahay nidaam qoondeysan oo Turbo ah, kaas oo hagaajin kara sharadka isboorti ee Isbaanishka haddii qiimayaashu ka hooseeyaan kuwa kale ee caalamiga ah ee laga soo galo waddanka. Haddayse guud ahaan kaalin muhiim ah ka qaataan dhacdooyinka isboorti ee aadka u ballaaran.
Gurigu wuxuu kaloo ku yaal dhacdooyin kala duwan oo nool oo ka dhaca Paris. Ciyaarta Paris ama ciyaarta ama tartanka waa qibrad aan laga tagin.
Betfair waa mid ka mid ah sharadka lagu taliyay Julio Maldonado 'Maldini”, joornaaliiste isboorti sidoo kale waa wakiilka rasmiga ah ee kooxaha Barcelona iyo Arsenal Paris Euroleague. Inta badan dabaqadda adduunka. Ma heli doontid tixraac ka fiican oo aad ku doorato xudunta. Muuqaalka shaashadda. Betfair ka dhacdaa tartan ma lahan.
Cayaaraha Betfair waxay bixiyaan noocyo kala duwan oo ka mid ah cayaaraha basketball ee Paris iyo horyaal. Waxaad ka heli kartaa wax walba, laga bilaabo NBA ee horyaalada Yurub iyo Euroleague, laakiin sidoo kale tartan ka jira Aasiya ama Koonfurta Ameerika. Beddel ikhtiyaarka ugu jaban, Waxaan kugula talineynaa in aan u aadno nidaamka Nidaamka Isweydaarsiga Paris Betfair dhacdooyinka waaweyn sida Ciyaaraha Olombikada, koobka adduunka iyo Euroleague Euroleague.
Hadaad aado goobta gurigan, waxaad ku arki doontaa shaashadda diiwaangelinta inaad ku dari doontid macluumaadkaaga shakhsiyeed (taasoo muhiim u ah inay run noqoto), magaca adeegsadaha, password iyo emayl. Abuuritaanka koonto Betfair waa mid aad u fudud, kaliya waqti ayey qaadataa.